(tonga teto avy amin'ny Fianakaviam-piteny sino-tibetana)
Ny fiteny sinô-tibetana dia fianakaviam-piteny any Azia Atsinanana sy Azia Atsimo Atsinanana sy Azia Afovoany ary Azia Atsimo. Isan'io fianakaviam-piteny io ireo fiteny sinoa izay ahitana fiteny folo tetenin'ny olona miisa 1 350 000 000 any ho any, sy ireo fiteny tibetô-birmana izay ahitana fiteny miisa 330 any ho any ary tenenin'ny olona miisa 70 000 000 any hoany.
Ilay mpokaroka atao hoe Laurent Sagart dia nanolo-kevitra ny hampiditra ny fianakaviam-piteny sino-tibetana sy ny fianakaviam-piteny aostrôneziana ao amin'ny fianakaviambem-piteny atao hoe sinotibetana-aostroneziana. Ireo fiteny aostrôneziana izay miely hatraty Madagasikara ka hatrany amin'ireo nosin'i Pasifika dia samy nipoitra avy any Taioàna, sady manana voanteny mifanahaka endrika sy hevitra amin'ireo fiteny fôrmôzana.
Misy sampana efatra lehibe ny fianakaviam-piteny sinô-tibetàna, dia: ny sampam-piteny sinoa na sinitika, ny sampam-piteny tibetika, ny sampam-piteny lolo-birmàna ary ny sampam-piteny karena. Misy koa fiteny maro hafa izay tsy isan'ireo sampam-piteny ireo.
Ny sampam-piteny sinoa na sinitika dia ahitana ny fiteny mandarina, ny fiteny oio, ny fiteny kantôney, ny fiteny minio, ny fiteny siangio, ny fiteny haka, ary ny fiteny ganio. Misa any amin'ny 1 300 tapitrisa ny mpiteny sinoa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fianakaviam-piteny_sinô-tibetana&oldid=995344"
Voaova farany tamin'ny 29 Jolay 2020 amin'ny 08:27 ity pejy ity.